IiRekodi zokuzalwa, umtshato kunye nokufa eFransi
Imbali kunye neNkcubeko Iingcebiso kunye namaTutorials
IsiFrentshi sokuBhaliswa koLuntu
Ubhaliso lwabantu bokuzalwa, ukufa kunye nemitshato yaseFransi yaqala ngo-1792. Ngenxa yokuba ezi ngxelo zihlanganisa bonke abantu, zifikeleleka kwaye zifakwe kwiikhowudi, kwaye zibandakanya abantu bazo zonke iicawa, ziyimithombo ebalulekileyo yoPhando lwesizukulwana sobuFrentshi. Ulwazi oluchazwe luyahlukahluka ngendawo kunye nexesha, kodwa ngokuqhelekileyo luquka usuku lomntu kunye nendawo yokuzalwa kunye namagama wabazali kunye / okanye iqabane.
Enye ibhonasi eyongezelelweyo yamarekhodi aseburhulumenteni aseFransi, kukuba iirekhodi zokuzalwa ziquka rhoqo into eyaziwa ngokuthi "ukungena kwamanqaku," amanqaku abhaliweyo abhalwe kwicala elingasecaleni, elingakhokelela kwiirekhodi ezongezelelweyo. Ukususela ngo-1897, oku kungeniswa kwemida kuya kubandakanya ulwazi lomtshato (umhla kunye nendawo). Ukwahlukana ngokubanzi ukususela ngowe-1939, ukufa kuka-1945, kunye nokuhlukana ngokwasemthethweni ukususela ngo-1958.
Eyona nxalenye ephambili yeRekodi zaseburhulumenteni zobhaliso lwabantu, nangona kunjalo, kukuba abaninzi banokufumaneka kwi-intanethi. Iirekhodi zobhaliso zombutho zigcinwe kubhaliso kwi-dolophu yasekhaya (i-hall ye dolophu), kunye neikopi ezigcinwe ngonyaka kunye nenkundla yomantyi. Iirekhodi ezingaphezu kweminyaka eyi-100 ubudala zifakwa kwi-Archives Départementales (uchungechunge E) kwaye ziyafumaneka ukubonisana noluntu. Kunokwenzeka ukuba kufumaneke ukufikelela kwiirekhodi zakutshanje, kodwa azinakuthi zifumaneke kwi-intanethi ngenxa yemingcele yemfihlo, kwaye ngokuqhelekileyo kufuneka uqinisekise ukuba usebenzisa izatifikethi zokuzalwa, uqobo lwakho oluvela ngqo kumntu osombonweni.
Uninzi lweeNcwadi zoLondolozo lweeNgcaciso zibeke iziqendu zeendawo zabo kwi-Intanethi, ngokuqhelekileyo ziqala nge- actes d'etat civili (iirekhodi zoluntu). Ngelishwa, ukufikelela kwi-intanethi kwiimpawu kunye nemifanekiso yezedijithali kuye kwavalwa kwimicimbi engaphezulu kweminyaka eyi-120 yiKhomishoni yesizwe i-informatique et des libertés (CNIL).
Indlela Yokufumana Iirekhodi Zobhaliso Lwabantu baseFransi
Fumana iKapa / iMasipala
Isinyathelo sokuqala esibalulekileyo kukuchonga kunye nomhla wokuzalwa, umtshato, okanye ukufa, kunye nesixeko okanye idolophu eFransi apho kwenzeka khona. Ngokubanzi ukwazi iSebe okanye ummandla waseFransi akwanele, nangona kukho iimeko ezifana neTables d'arrondissement de Versailles ezithatha ii-actes of state kwiinkalo ezili-114 (1843-1892) kwisebe leYvelines. Uninzi lweirekhodi zobhaliso zoluntu, nangona kunjalo, ziyafumaneka kuphela ngokumazi idolophu - ngaphandle kokuba, unomonde wokukhawulela iphepha ngephepha ngokusebenzisa iirekodi zamaninzi ukuba akukho ngamaninzi ahlukeneyo.
Xa usufumene i dolophu, isinyathelo esilandelayo kukubona isebe eliba nelo lirekhodi ngokufumana idolophu ( ukusetyenziswa) kwipuphu okanye ukusebenzisa i-intanethi njenge- lutzelhouse yesebe yaseFrance . Kwizixeko ezinkulu, ezinjengoNice okanye eParis, kunokubakho ezininzi zezithili zokubhalisa, ngoko ke, ngaphandle kokuba ungakwazi ukubona indawo esekelwe kuyo kwisixeko abahlala kuyo, unganakho ukhetho kodwa ukhangele iirekhodi zezithili ezininzi zokubhalisa.
Ngolu lwazi, ndelayo thola i-intanethi ye-Archives Départementales kwintlanganiso yakho, ngokuthetha nge-online directory njenge- French Genealogy Records Online , okanye usebenzise i-injini yakho yokukhangela, ukufuna igama le-archives (umz . uvimba ) kwakunye ne " civil society " .
Iidable Annuelles kunye neeTables iDecennales
Ukuba iirejistra zombutho zifumaneka kwi-intanethi ngokugcinwa kwirejista yesebe, ngokuqhelekileyo kuya kuba ngumsebenzi wokukhangela okanye uphendule kwimizi efanelekileyo. Ukuba unyaka wesiganeko uyaziwa, ngoko unokwazi ukuphequlula ngqo kwi-rejista yaloo nyaka, uze ubuyele emva kwerejista kwi- tables annuelles , uludwe lwe -alfabhethi lwamagama kunye nemihla, ehlelwe ngohlobo lomcimbi- ukuzalwa (umtshato), umtshato ( umtshato ), kunye nokufa (ukufa), kunye nenombolo yokungena (kungekhona inombolo yephepha).
Ukuba awuqinisekanga yonyaka othe ngqo weso siganeko, khangela ikhonkco kwiiDables Decennales , ezibizwa ngokuba yi-TD. Ezi zihlomelo zeminyaka elishumi ziluhlu lwawo onke amagama kwisiganeko ngasinye soluhlu lwama-alfabhethi, okanye liqokelelwe yileta yokuqala yegama elidlulileyo, kwaye emva kwexesha lomcimbi.
Ngolwazi oluvela kwiitheyibhile ze-decennales ungakwazi ukufikelela kwirejista yaloo nyaka kwaye uphendule ngqo kwingxenye yerejista kweso siganeko, kwaye emva kwexesha ukuya kumhla wesiganeko.
Iirekhodi Zombutho - Oko Kukulindela
Uninzi lweeRejista zobhaliso zokuzalwa kwabantu, umtshato kunye nokufa zibhalwa ngesiFrentshi, nangona oku kungabonakali nzima kubaphandi abangathethi baseFrentshi njengoko ifomati ifana neyona nkcukacha. Konke okufuneka ukwenze ukufunda amagama ambalwa asezantsi aseFrentshi (umz. Ukuzalwa = ukuzalwa) kwaye unokufunda kakhulu irejista yoluntu yaseFransi. Uluhlu loLwimi lwesiFrentshi lwamaLwimi luquka uluhlu oluqhelekileyo lwemizobo yokuzalwa yemveli ngesiNgesi, kunye neziFrentshi zabo zesiFrentshi. Ukwahlukana ngendawo apho kwimeko ethile kwimbali yayingaphantsi kolawulo loorhulumente ohlukeneyo. E-Alsace-Lorraine, umzekelo, ezinye iirejistra zombutho zaseJamani . E-Nice naseKorse, abanye baseNtaliyane .
Iimpazamo ezili-10 eziphezulu zoGama lokuPhepha
Icandelo, iKapa kunye neRange
Ukuhlalutya Umbhalo Weembali
Igalari yeSithombe seMangcwabo kunye neMifanekiso
Izifundo zoLwazi lweGenesalog
Ukufunda Okudala Ukubhala
5 Izindlela Ezinkulu Zokusasaza Imbali Yakho Yentsapho
Inkundla yeFence yeTabernakele
Kunzima Ukufumana Umculo Weklasi
Izizathu ezi-10 zama Dinosaurs Yenza izilwanyana ezilungileyo
Indlela Umdlalo weHammer Golf / Bet udlala ngayo
I-Enthalpy Ishintsho seMpendulo Isibonelo Ingxaki
9 Supest Superman vs Flash Races of All-Time
IiMoya zikaBobby Mackey's Nightclub
Iyiphi idilesi yeSimpsons?
IsiGama seZakhiwo soLwakhiwo lweSigama
Ukushisa okungaqhelekanga Inkcazo
I-Pfeiffer University Admissions